मनोरन्जन Archives - Valley Khabar
August 30, 2019 dhan kush
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका […]
भियग्रा प्रयोगले कति समय सम्म यौन क्षमता बढाउँछन् ? थाहा पाईराख्नुस
August 29, 2019 dhan kush
भियग्रा प्रयोगले कति समय सम्म यौन क्षमता बढाउँछन् ? थाहा पाईराख्नुस कमजोर यौन क्षमता भएका अधिकांश मानिसहरू भियग्राको प्रयोग गरी यौन क्षमता बढाउँछन् । यसको प्रयोगपछि केही समय त शरीरका लागि ठीकै होला तर, साइड […]
घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरुको नियत प्रती घृणा लाग्छ- सिम्रन भट्ट भनिन्छ मानिसको जीवनमा सुख दुख आउँछन् जान्छन् । मानिस सधै भरि सुखी पनि हुदैन् र दुखी पनि हुदैन् न अजम्बरी […]
August 28, 2019 dhan kush
यो उमेरका महिलाले सबैंभन्दा धेरैं यौनसम्पर्क राख्न चाहान्छन् ! यस्तो छ वैज्ञानिक कारण ?(भिडियो हेर्नुहोस)
August 24, 2019 dhan kush
काठमाडौं । धेरैं व्यक्तिहरुलाई लाग्न यौनसम्पर्कको आन्नद जवानिमा मात्रैं हुन्छ । तर यूकेमा गरेको अनुसन्धानले यी सबै विचारहरूको गलत्त सावित गर्दै अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यस ब्रिटिश अनुसन्धानको अनुसार, २८ देखि ३८ वर्षको […]
August 23, 2019 dhan kush
काठमाडौं । श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमान संग किन नजिक हुन्छन, जब आफ्नो श्रीमान हुदाँहुदैँ अरु कै श्रीमानसंग सल्किने गरेको पाइन्छ । बिसेषगरि पछिल्लो समय श्रीमानहरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग सल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ सबैलाइ […]
यौन जिज्ञासा )म २० वर्षीया अविवाहित महिला हुँ… योनि कसिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
August 20, 2019 dhan kush
योनि कसिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? म २० वर्षीया अविवाहित महिला हुँ । दुई वर्षअघि मेरो केटा साथीसँग यौनसम्पर्क हुन्थ्यो तर अहिले हुँदैन । आजभोलि मेरो योनि चिलाउँछ र खुकुलो पनि छ । यसले भविष्यमा समस्या निम्त्याउँछ कि […]
August 19, 2019 dhan kush
बिदेश त सपनामा पनि देख्न नपरोस’ परदेशको कुरा गर्नासाथ सुनसरीको एउटा पुरानो नगरपालिकामा बसोबास गर्ने उषा (नाम परिवर्तन)को अनुहारमा आक्रोशका धर्का देखिन्छन् । साउदी अरेबिया र कुवेतमा दुई वर्षसम्म घरेलु कामदारले भोग्न नपर्ने सबै खाले […]
“के गर्दै हुनुहुन्छ? सुत्ने बेला भएन?” “तिमिलाइ सम्झेर बसेको।” म जिस्किएँ। “किन सम्झिनु त अनि सुत्ने बेलामा।” उसले खित्का छोडी। “त्यही सुत्ने बेलामा त झन् धेरै याद आउँछ नि डल्ली।” म छिल्लिएँ। “ए हो? अरु […]
यी फिटनेस प्रशिक्षकको नाम रिची शाह हो । यी सुन्दरी निकै प्रसिद्ध फिटनेस प्रशिक्षक हुन् यस बाहेक उनलाई मोडलिङ गर्न पनि रहर लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनका फोटोहरु निकै चर्चामा छन् । फोटोमा उनी […]